फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - लेखकको पत्र : रविन्द्रनाथ त्यागी
लेखकको पत्र : रविन्द्रनाथ त्यागी अनुवाद
तपाईंको असोज १५ गतेको पत्र प्राप्त भयो । तपाईंको लेखकस्वको रकम हालसम्म प्राप्त गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको व्यहोरा अवगत भयो । यस सन्दर्भमा हाम्रो नम्र निवेदन यो छ– तपाईंले लेखकस्व नपाउनुको कारण हामीले नपठाएर नै हो । हामी यहाँ नयाँ प्रेस स्थापना गर्न व्यस्त भयौँ– पचासौँ लाख खर्च भयो । सबै तपाईंहरू जस्तै लेखकहरूको कृपाले यो संभव भएको हो । अब यो प्रेसमा तपाईंहरूको पुस्तक यति सुन्दर रूपरङ्मा छापिनेछ कि समीक्षकहरूले यसलाई पढ्नै पर्दैन । त्यो पुस्तक हेर्नु नै काफी हुनेछ ।
गएको आर्थिक वर्ष आर्थिक हिसाबले ठीक रहेन । तपाईंहरू जस्ता कुनै लेखकहरूका पनि किताब चलेनन् । अघिल्लो वर्ष विक्री भएका भनिएका पुस्तकहरू पनि फिर्ता आए, स्थिति यस्तो रह्यो । एकातिर यस्तो भयो भने अर्कातिर मुसाले साहित्यिक पुस्तकहरू धेरै खाए । पाठकहरूभन्दा बढी मुसाहरू सक्रिय भए ।
यो पत्रसँगै दुई सय अठ्तिस रुपियाँको चेक संलग्न छ । कृपया प्राप्तिको जानकारी दिनुहोला । हामीलाई थाहा छ– यो राशी तपाईंहरू जस्ता लेखकहरूका लागि ज्यादै न्यून हो तर ती लेखकहरू जसले एक पैसा पनि पाएका छैनन् तीतिर पनि ध्यान दिनुहोस् । एउटा कुरा– तपाईंजस्तो लेखकले यस्ता कथा, कविता, व्यङ्ग्य तथा आलोचना– निबन्ध जस्ता अल्छे विधामा मात्र कति अल्झिरहने ? अपराध, सेक्स, बलात्कार–कथा तथा कलेजका गाइड गेस–पेपरहरूतिर किन ध्यान नदिने ? पाठक बढाउन किन नखोज्ने ? यो हाम्रो सुझाव मनन गरी फाइदा उठाउनुहोस् । पाण्डुलिपि राम्ररी चयन गर्न पाण्डुलिपिको सार पनि त लोकप्रिय हुनु पर्यो नि ? होइन र ?
बाँकी पछि ।